ငါးမန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝဲ အပေါ်မှ နာရီလက်တံအတိုင်း။ spiny dogfish, Australian angelshark, ဝေလငါးမန်း, ငါးမန်းဖြူကြီး, horn shark, frilled shark, scalloped hammerhead and ဂျပန် ငါးမန်းစွယ်သည်
"အောက်ပါ မျိုးစဉ်တစ်ခုစီမှ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။"
Squaliformes, Squatiniformes, Orectolobiformes, Lamniformes, Heterodontiformes, Hexanchiformes, Carcharhiniformes and Pristiophoriformes
ငါးမန်း ဆိုသည်မှာ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဆင်၍ မျိုးစဉ်တူပြီး မျိုးရင်း၊ မျိုးစု၊ မျိုးစိတ် မတူကြသော အသားစား အဏ္ဏဝါသားရဲတိရစ္ဆာန် ငါးများကို စုပေါင်း ခေါ်ဆိုလေ့ရှိကြသည့် လူအသုံးအများဆုံး အမည်နာမ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ငါးမန်းတို့တွင် တစ်တောင်သာသာမျှသာရှိသော ငါးမန်းငယ်မျိုးမှ ကိုယ်ထည်ကြီးမားသော ငါးမန်းကြီးမျိုး အထိ အမျိုးများစွာရှိသည်။ ငါးမန်းတို့သည် ငလိပ်ကျောက်များနှင့်အတူ ဆီလာချီမော်ဖာ အထက်မျိုးစဉ်ကြီးတွင်ပါဝင်ကြသည်။ ငါးမန်းကြီးမျိုးသည် ပေ ၄ဝ မှ တစ်ခါတစ်ရံ ပေ ၆ဝ လောက်အထိပင် ကြီးမားသည်။ ငါးမန်းကို အေးသောအရပ်ဒေသများမှထက် ပူသောနေရာဒေသများတွင် ပို၍တွေ့မြင်ရသည်။ မျိုးပွားနှုန်းအလွန်နှေးကွေးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးသူများပြားခြင်းတို့ကြောင့် မျိုးတုံးမည့်အခွင့်အလမ်းအများဆုံးငါးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ငါးမန်းတောင်ဟင်းချိုကို တန်ဖိုးထားစားသောက်လေ့ရှိသောကြောင့်လည်း ဖမ်းဆီးသူ များပြားရသည်။ ငါးမန်းတို့သည် ခရီးဝေးဝေး သွားလာကာ ကျက်စားတတ်သည်။ ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ဝင်ရိုးစွန်းတို့ရှိ ဂရင်းလန်ကျွန်းအနီးမှ ငမန်းတို့သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံကမ်းခြေသို့ပင်ရောက်အောင် ဆင်းလာ၍ ကျက်စားတတ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ငါးမန်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးအလွန် ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲတွင်လည်း အနှံ့အပြား တွေ့ရှိရ၏။ ပင်လယ်ကမ်းရိုးဒေသတို့မှတစ်ပါး အခြားဒေသတို့တွင် ငါးမန်းကို ဟင်းလျာအဖြစ်စားလေ့မရှိသော်လည်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက်မူ အသုံးပြုကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငါးမန်းရေကို ဓားရိုးဖုံးရန် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အမြီးမှတစ်ပါး ငါးမန်း၏ ဆူးတောင်ကို နိုင်ငံခြားသို့ အမြောက်အမြား တင်ပို့ရောင်းချရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်မူ ထိုဆူးတောင်များကို စားသုံး၍ ယင်းမှ ကော်တစ်မျိုး ပြုလုပ်ယူလေသည်။ ငမန်းအသည်းမှ ရသောအဆီတွင် ဗီတာမင်အေဓာတ်များစွာ ပါရှိသဖြင့် ငါးကြီး ဆီအစား ငါးမန်းဆီကို ချက်လုပ်ရောင်းချလေ့ရှိကြ၏။
ငါးမန်းမျိုးတွင် ငါးမန်းခေါင်းဝိုင်း၊ ငါးမန်းတောင်မဲ၊ ငါးမန်းငှက်ပျံ၊ ငါးမန်းနီ၊ ငါးမန်းကျွဲ၊ ငါးမန်းသံဝတ်၊ ငါးမန်းပြောက်၊ ငါးမန်းစွယ်သည်၊ ငါးမန်းကား၊ ငလိပ်ကျောက်၊ လိပ်ကျောက်တံခွန်၊ လျှပ်စစ်လိပ်ကျောက် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ကိုယ်ထည် ပုံအမျိုးမျိုးကိုလိုက်၍ အမည်ကွဲပြားသည်။
↑ | "Selachii (shark) website:onlinelibrary.wiley.com" (2012). Journal of Morphology 273 (10): 1096–1110. doi:10.1002/jmor.20047. PMID 22730019.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငါးမန်း&oldid=718696" မှ ရယူရန်
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။